Huawei Uzamile ukusothusa (kwaye inkwenkwe iphumelele) kunye neyakhe I-smartphone entsha ye-Android, i Uncumo oluhlabayo. Okwangoku akukho nto ibonisa ukuba ifikelela eYurophu kodwa kufanelekile ukuyazi. Ekuboneni kuqala, sele kuyamangalisa uyilo lwayo, eyona nto ibaluleke kakhulu malunga nesiphelo sayo njengebhodi yezitshixo yeqwerty / candybar.
El Uncumo oluhlabayo izakwaziswa kwintengiso kule nyanga eThailand, ngumqhubi Spriiing, kwaye izakubakhona kwimakethi yase-Australia, ilizwe apho liya kufumana igama Ukukhuthaza iDroid Kwaye ziya kuthengiswa yi-Boost yomsebenzisi.
Ukuchazwa kwayo akuyiyo eyona nto ibalaseleyo, kodwa ayisiyiyo eyokugcina ukuyidelela nokuba yeyiphi na. Ukuqala, i Uncumo olujikelezayo luhamba kunye I-Android 2.1 Eclair. Ukongeza, ineprosesa yeQualcomm 528MHz, isikrini sayo sinobungakanani bee-intshi ezi-2,6, inegalelo lekhadi le-MicroSD ukunyusa inkumbulo yangaphakathi ukuya kuthi ga kwi-16 GB kwaye ine-256 MB ye-RAM. Kwelinye icala, inika uqhagamshelo ngeNethiwekhi ye-HSPA / WCDMA kunye ne-GSM, kunye ne-Wi-Fi, iBluetooth, GPS / A-GPS.
Akukho nto ingako yokuthetha ngale nto I-Android kunye nekhibhodi ebonakalayo. Apha unayo ifayile ye- i vidiyo ukuze bakwazi ukuluqonda olu ncumo luSpriiing emsebenzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Smile Spriiing, i-Android enebhodi yezitshixo eThailand
UMario Fajardo sitsho
Phendula uMario Fajardo